Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo Jordan uga qeyb-galaya Shirka Baaralamaannada Carabta – Kalfadhi
Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo Jordan uga qeyb-galaya Shirka Baaralamaannada Carabta
Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Mursal Sh. Cabdiraxmaan, ayaa u tagay magaalada Cammaan ee caasimadda dalka Jordan inuu halkaas uga qeyb galo shir ay Baarlamaannada dalalka Carabta ku yeelanayaan halkaas. Shirkaas, oo socon doona ugu badnaan 4 maalin, ayaa dhici doona horaanta bishan Maarso, 2019-ka.
Guddoomiye Mursal waxaa socdaalka uu ku joogo Cammaan ku wehliya xubno kale, waxaana markii ay ka degeen caasimadda Cammaan kusoo dhaweeyey halkaas Guddoomiye Kuxigeenka 1-aad ee Baarlamaanka Jordan, Dr. Nasar Alqeysi iyo xubno kale oo ka tirsan baarlamaanka dalkaas.
Shirka uu Guddoomiye Mursal uga qeybgalayo Jordan waa shirkii 29-aad ee Midowga Baarlamaannada Carabta, oo sanadkan ka dhacaya magaalada Cammaan ee caasimadda dalka Jordan, halkaas oo ah meeshii midowgaas lagu aas-aasay bishii Diseenbar, sanadkii 2002-dii, kadib markii ay sidaas ku heshiiyeen Baarlamaannada dalalka Carabta.
Ka qeybgalka Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee shirkaas ayaa imaanya iyada oo aan wali la xalin tabasho uu Golaha Aqalka Sare u gudbiyey Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS), Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, taas oo qeyb ahaan ku saleysneyd inuu Golaha Shacabku marooqsaday ku matalidda Baarlamaanka Soomaaliya Baarlamaannada uu xubinta ka yahay ee gobolka, qaaradda iyo kuwa isbaheysiyadda caalamka.
Xildhibaan Jindi: Dal dhan iyo ummad dhan malagu dhaqi karaa been, booto iyo igu sawir?